Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Mona Lisa 400 taona no hatao lavanty any Paris
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao farany Brezila • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Mona Lisa 400 taona no hatao lavanty any Paris.
Ny kopian'i Mona Lisa natao hamidy any Paris dia mitovitovy amin'ny tany am-boalohany, ka azo inoana fa nanakaiky ny dikan-tenin'i Leonardo ilay mpanakanto.
Ny dika mitovy amin'ny taonjato faha-17 an'i Leonardo da Vinci' Mona Lisa malaza dia mankany amin'ny sakana lavanty Paris.
Tombanana ho 150,000-200,000 euros ny dika mitovy amin'ny sangan'asan'i da Vinci.
Ny kopian'i Mona Lisa tamin'ny taonjato faha-17 hafa dia namidy 2.9 tapitrisa euros tamin'ny volana Jona tao amin'ny Christie's any Paris.
Ny trano lavanty Artcurial any Paris, Frantsa dia nanambara fa ny dika mitovy amin'ny an'i Leonardo da Vinci Mona Lisa manomboka amin'ny 1600 eo ho eo no hatao lavanty ny talata.
Ny dika mitovy mahatoky amin'ny sangan'asan'i da Vinci efa ho 400 taona mahery lasa izay dia ho lasa eo ambany tantanana volana vitsivitsy monja taorian'ny famoahana indray ny iray amin'ireo sary hoso-doko malaza indrindra eran-tany amidy amin'ny vidiny mirary.
Ny tany am-boalohany nataon'i Leonardo da Vinci, izay novidin'ny mpanjaka frantsay Francois I tamin'ny mpanao hosodoko tamin'ny 1518, dia aseho ao amin'ny tranombakoka Paris. Louvre Museum ary tsy amidy.
Mona LisaNy dika mitovy amin'ny hamidy any Paris dia mitovy amin'ny tany am-boalohany ka azo inoana fa nahazo fidirana akaiky tamin'ny dikan-tenin'i Leonardo ilay mpanakanto, hoy ny trano lavanty Artcurial.
"Mona Lisa no vehivavy tsara tarehy indrindra amin'ny fanaovana hosodoko," hoy i Matthieu Fournier, manam-pahaizana momba ny trano lavanty sy mpanao lavanty Artcurial, rehefa naseho ampahibemaso ny sary hosodoko talohan'ny fivarotana.
"Ny tsirairay dia maniry ny hanana dikan-teny Mona Lisa avo lenta."
Ny dika mitovy dia andrasana haka 150,000-200,000 euros ($173,000-230,000 dolara).
Tamin’ny volana Jona lasa teo, dia nividy dika mitovy tamin’ny taonjato faha-17 ny mpanangom-bokatra eoropeanina iray Mona Lisa ho an'ny 2.9 tapitrisa euros ($3.35 tapitrisa), firaketana an-tsoratra ho an'ny famokarana ny asa, tamin'ny lavanty tao amin'ny Christie's any Paris.
Ary tamin'ny taona 2017, namidin'i Christie's New York ny Salvator Mundi an'i Leonardo da Vinci tamin'ny $ 450 tapitrisa.